Paunowana mukana, tora kopi ye Kukundikana: Chakavanzika Chekubudirira neshamwari Robby Slaughter. Robby akaisa pamwechete mutungamiriri mukuru pa kutadza kubudirira kuitira kuti iwe ugone kudzidza uye kukura kubva pakutadza kwako. Ini handikwanise kuita bhuku kururamisira - kune anoshamisa madhisiki kubva kune vamwe vevakuru vatungamiriri muindasitiri.
Nekudaro, ini ndoda kugovera zvimwe zve kutadza makotesheni kubva mubhuku kukurudzira iwe:
Ruzivo rwunowanikwa mukukundikana runowanzo shanda mukuzadzisa budiriro inotevera. Mune akareruka mazwi, kukundikana ndiye wekupedzisira mudzidzisi. David Garvin
Ini ndarasikirwa anopfuura mapfumbamwe eepfuti mune rangu basa. Ndarasikirwa ingangoita mazana matatu mitambo. Makumi maviri nematanhatu, ndakavimbwa kutora mutambo kuhwina pfuti ndikarasikirwa. Ndakatadza kasingaperi uye kakawanda muhupenyu hwangu. Uye ndosaka ndichibudirira. Michael Jordan
Kukundikana kunosimbisa kukosha kwekutora mikana. Iyo cliche ndeyechokwadi: Kana ukasatora njodzi, hapazovi nemubairo. Uye kana iwe uri kutora njodzi, ingangoita nedudziro, iwe unozokundikana pane imwe nguva. Jeff Wuorio
Ini handina kutadza zviuru gumi. Ini ndakabudirira kuwana zviuru gumi nzira zvisingashande. Thomas Edison
Hapana munhu asingakwanise kufara mukuwanikwa kwake ega zvikanganiso anokodzera kunzi mudzidzi. Donald Foster
Kukundikana unongova mukana wekutanga zvakare, ino nguva zvine hungwaru. Henry Ford
Nyanzvi munhu akaita zvikanganiso zvese zvinogona kugadzirwa mundima yakatetepa kwazvo. Neils Bohr
Tinogona chete kuita fambiro mberi inoshamisa muhunyanzvi kuburikidza nekundikana kuzhinji. Takeo Fukui
Avo vanobudirira vanowanzove ivo vanozvibvumira ivo pachavo kukundikana. Chris Brogan naJulien Smith
Mutemo # 1: iwe unofanirwa kudzidza kutadza, kuhwina. David Sandler
Heino vhidhiyo inonakidza kubva kuHonda ine zita rimwe chete, ichikurukura nezvokundikana kwaHonda mumakore ese aya.
Raira kopi ye Kukundikana: Chakavanzika Chekubudirira uye uve nechokwadi chekutarisa zvaRobby zviri kuenderera mberi pane rake blogkutadza.
Tags: kukanganisabudiriroChakavanzika chekubudirira
Kushambadzira Kwako Hakusi Pamutemo Here?
Aug 30, 2010 pa 7: 54 AM
Ini ndinotenda zvinotsigira pachokwadi kwete chete nevatungamiriri vemaindasitiri, asi vatungamiririwo zvavo. Vatungamiriri vanokundikana.
Semuenzaniso, akarasikirwa nebasa, akatanga bhizizi rake uye akatadza. Akakundwa, mubhidha, semutauri weimba, mudare reseneti. Akakundwa mukuedza kusarudzwa kweCongress, Senate uye Mutevedzeri weMutungamiri. Akakunda chigaro chekongiresi ipapo haana kuzosarudzwa! Akatambura kushushikana kwekutya uye akabva arambwa semutungamiriri wenyika. Zvakare, akakundwa muSeneti kumhanya. Haana kukanda mapfumo pasi. Aive Abraham Lincoln.
Sep 6, 2010 pa 11: 50 AM
Neimwe nzira Google Alerts haina kuzivisa izvi kwandiri nekukurumidza, asi ndinotenda Doug!